Turkiga, oo sheegay in uu garab taaganyahay Falastiin oo kasoo horjeedda heshiiska Imaradka iyo Israel. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Turkiga, oo sheegay in uu garab taaganyahay Falastiin oo kasoo horjeedda heshiiska Imaradka iyo Israel.
Turkiga, oo sheegay in uu garab taaganyahay Falastiin oo kasoo horjeedda heshiiska Imaradka iyo Israel.
Wasiirka umuuraha Dibadda ee Dalka Turkiga, ayaa sheegay in dawladdiisu ay soo dhawaynayso kulan maalinimadii shalay khamiista ahayd dhexmaray Madaxweynaha reer Falastiin Maxamuud Cabaas iyo hoggaanka qeybaha Bulshada falastiiniyiinta ee gudaha iyo dibadda.
Kulankaan ayaa looga hadlay sidii looga hortagi lahaa qorshayaal lasheegay in Israel ay ku dooneyso in ay la wareegto deegaano hor leh oo katirsan dhulka Faslastiin. Kulanka,waxaa qadka Internetka kaga qeybgalay Madaxda ku sugan Ramallah iyo Beirut.
War-murtiyeed ka soo baxay Wasaaradda Umuuraha Dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in dawladda uu hoggaamiyo Erdogan ay ahmiyad iyo mudnaan siinayso howlaha dib-u-heshiisiinta iyo dhiirigelinta qadiyadda reer Falastiin.
Warbixin, waxaana intaas la raaciyay inTurkigu uu sii wadi doono dhiiri gelinta dadaalka loogu jiro gaaritaanka midnimada iyo wadajirka dhinacyada Falastiiniyiinta.
Maamulka Falastiin iyo bulshada rayidka iyo kooxaha Islaamiyiinta, ayaa cambaareeyay heshiiska Imaaraatka iyo Israa’iil, waxayna sheegeen inuusan u adeegeynin qadiyadda Falastiin. Isla markaan dhinacyada heshiiyay ay iska indo Tirayaan xuquuqda Falastiiniyiinta.
Itoobiya, oo farrinta Mobile-ka ugu diraysa najiitada qofka iska baara Covid-19
Ciidamada Mareykanka oo ka guuray Balli-doogle
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay heshiis Deni la galay DPWorld